Keliya sida aad tahay! , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Billy Graham wuxuu had iyo goor u adeegsaday muujinta inuu dadka ku dhiiri geliyo inay aqbalaan madaxfurashada aan ku haysanno Ciise: Wuxuu yiri, "Kaalay sidaad tahay oo kale!" Waa waano in Eebbe arkaa wax kasta: waxayaabaha ugu wanaagsan iyo kan ugu xun, oo weliba wuu inaga jecel yahay. Yeedhku "imminka uun ha yimaado" wuxuu ka tarjumayaa ereyadii rasuul Bawlos:
«Sababtoo ah Masiixu wuxuu innaga dhintey waqtigii aan weli itaal yarayn. Imminka qofba qof ayaa u dhinta sabab uun awgeed; laga yaabee wanaag awgeed inuu nolosha ku darsado. Laakiin Ilaah wuxuu ina tusiyaa jacaylkiisa uu inoo qabo xaqiiqda ah in Masiixu innaga u dhintay markii aan weli dembilayaal ahayn. (Rooma 5,6-8).
Dad badan maanta ma xitaa ka fikiraan dembiga. Jiilkeena casriga ah iyo kan ka dambeeyaba waxay u maleynayaan in ka badan dareenka "faaruqnimada", "rajo la'aan" ama "dareen la'aan", oo waxay u arkaan sababta halganka gudaha iyaga oo ah dareen liidnimo. Waxaa laga yaabaa inay isku dayaan inay naftooda jeclaadaan si ay u noqdaan dad jecel, laakiin inta badan intabadan ahayn, waxay dareemayaan inay gabi ahaanba dhamaadeen, jabeen, iyo inaysan waligood nabad noqon doonin. Ilaahay naguma qeexdo ciladaheena iyo guul daradeena; Wuxuu arkaa nolosheena oo dhan. Kuwa xun sida wanaagsan oo isaguna si shuruud la’aan ayuu inoo jecel yahay. Xitaa haddii ayan ku adkaanaynin inuu Eebbe jeclaado, badiyaa way nagu adag tahay inaanu aqbalno jacaylkan. Waxaan si qoto dheer u og nahay inaanaan u qalmin jacaylkan.
Qarnigii 15aad, Martin Luther wuxuu la halgamay halgan adag si uu ugu noolaado nolol damiir leh. Wuxuu had iyo jeer ogaaday inuu guuldaraystay. Isagoo jahwareersan, wuxuu ugu dambeyntii helay xorriyadda nimcada Eebbe. Ilaa waqtigaas, Luther wuxuu ku gartay dembiyadiisa - oo wuxuu ka helay rajo xumo - bedelkii Ciise, oo ahaa wiilkii Ilaah kaamil ah oo la jecel yahay, kaasoo qaatay dembiyadii dunida, oo uu ku jiray dembiyadii Luther.
Ilaah wuu ku jecel yahay. Xitaa haddii Ilaah neceb yahay dembiga qalbiga ka hooseeya, isagu kuma necbaado. Ilaah wuu jecel yahay dadka oo dhan. Wuu neceb yahay dembiga si sax ah sababta oo ah wuxuu dhaawacaa oo baabi'iyaa dadka.
"Kaalay sidaad tahay" oo macnaheedu yahay Ilaah kaa sugi maayo inaad ka fiicnaato ka hor intaadan u imaan isaga. Horaa uu kuu jecel yahay, inkasta oo wixii aad qabtay. Ciise waa jidka loo hubo ee boqortooyada Ilaah iyo kaamilka saxda ah ee baahidooda oo dhan. Waa maxay waxa kaa horjoogsanaya waaya-aragnimada ah inaad la kulanto jacaylka Ilaah? Waxkastoo ay tahayba: gacanta culus ku wareeji Ciise, isagu wuu ka awood badan yahay inuu kugu qaado meeshaada?